Mini Golden Retriever Breed Profile: Size, Ahịa na More ... - Reeddịrị
Mini Golden Retriever na-eweta àgwà anwụ anwụ na-acha anwụ anwụ na obere nwa na enyi na enyi.
N'ihi oke ha, ha nwere ike ibi n'ụlọ ma ha zuru oke maka ndị na-achọ nọ n'ọrụ ezinụlọ.
Ha anaghị enwe mmetụta ma na-egosi ịhụnanya.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ anwụ na karama, leezie anya karịa Mini Retriever!
N’isiokwu a anyị kọwara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ha ...
Mini Golden Retriever Na Ileba Anya
Mini Golden Retriever Isi
Ego ole ka Obere Golden Retriever na-efu?
Mini Golden Retriever Ọdịdị
Obere ezumike nlekọta na-agba ọsọ agba agba agba nke ọla edo
Olee otú Iji Zụọ A Miniature Golden Retriever
The Mini Golden Retriever nwere àgwà niile kachasị mma nke ọla edo dị obere na obere ngwugwu!
The Mini Golden Retriever abụghị ụdị dị ọcha ma ọ bụ n'ezie obe n'etiti Golden Retriever na Cocker Spaniel. Nke a na - eweta mmụọ obi ụtọ zuru oke maka ezinụlọ na ndị bi naanị ha.
Ewu ewu: # 35.
Arọ: 20-45 pound.
Ahịa: $ 3500 +.
Mmadụ: Ndụ, mmekọrịta mmadụ na ọgụgụ isi.
Ahịa : $ 1500- $ 2000
Nha : 40-60 pound
Ọrụ : Ọkara
Lablọ nyocha Bekee
Ahịa : $ 600- $ 1200
Afọ ndụ : 10-12 afọ
Nha : 60-80 pound
Shed : Ọkara
Obere ọla edo
Ahịa : $ 3500
Nha : 20-45 pound
Shed : Ala / Ọkara
The Mini Golden Retriever bụ n'ezie obe n'etiti Golden Retriever na Cocker Spaniel.
Ha bụ ndị enyi zuru oke ma na-achọ ka ha na ezinụlọ ha na-anọrị.
Agbanyeghị na ha pere mpe karịa ka ha nwegogo Golden Retriever ha ka nwere otu mbinye aka ahụ arụ nke positivity.
Dika umu nne na nna ha sitere na Sporting Group ị nwere ike ịtụ anya ka ụdị a dị ka egwuregwu ka ha dị mma. Ha na-eme ezigbo enyi egwuregwu ma ọ bụ onye na-agba ọsọ.
Ọzọkwa ha na-amalite ịghọ nkịta ọgwụgwọ nkịtị n'ihi ọdịdị ịhụnanya ha.
Site n'omume sitere n'aka Golden Retriever na Cocker Spaniel dị ụtọ, Obere Golden kachasị elu na ndụ ezinụlọ dịka ha bụ ndị nwere mmekọrịta mmekọrịta na ukwuu trainable ìgwè .
Naanị cheta na ogo ike ha nwere ike ịdị ntakịrị nke mere na ha ga-achọ ndị ezinụlọ ka ha gwuo egwu na ụbọchị niile.
N'ihe banyere ilekọta ụdị a, ị ga-atụ anya itinye oge na ejiji na imega ahụ. N'ịgafe nke a, a na - achọ otu ụdị nlekọta ahụgodi ọ bụla ọzọ.
Y’oburu n’inweghari onu ahia ihe umuaka a, nke a buru nkita zuru oke diri ezin’ulo gi.
Nketa nke mara mma nke Golden.
Omume dị nwayọọ ma dị ụtọ.
Nwere ike ime nke ọma na ụlọ.
Ezigbo ezinụlọ nkịta mgbe mmekọrịta.
Ezigbo ọzụzụ na ọgụgụ isi.
Azu oke onu ahia.
Na-agbasa n'ihi na ọ bụghị nfụkasị enyi na enyi.
Nnọọ ike maka ndị na-anọkarị otu ebe.
O siri ike ịkọ nha ha n'ọdịnihu.
Ingstụtụ n'ụtụtụ Mini Golden Retriever ga-adabere na nkịta ọ bụla. Fọdụ ga-abụ ndị na-egwuri egwu site na mbata ma na-asa gị nsusu ọnụ iji nyere gị aka ịkwadebe maka ụbọchị ahụ, ebe ndị ọzọ nwere ike ịdị nwayọ ma wepụta oge iji teta n'ụra.
Mgbe ị gagharịchara ngagharị na Mini Mini, ọ ga-enwe obi ụtọ ichere gị na ezinụlọ gị iji kwadebe maka ụbọchị ahụ tupu ị kpọga ha n'ogige ntụrụndụ maka mmega ahụ dị ezigbo mkpa.
I kwesiri ịtụ anya na ị ga-akwụsị mgbe niile n'ụzọ ka Mini Golden gị na-ekele onye ọ bụla bịara abịa ma jiri nkịta ọ bụla na-agafe ya na-egwuri egwu.
Ulo a nwere obi uto izute ndi mmadu ohuru ka i wee hu onwe gi ka gi na ndi mmadu di iche okwu.
Na ogige ha ga-enwe mmasị ịme ihe ọ bụla.
Inye, agha, ma ọ bụ naanị ikwe ka nwa gị zute nkịta ndị ọzọ ga-eme ka ụdị a nwee obi ụtọ. N'ihi ụdị ike nke ìgwè a, ị ga-atụ anya ka gị na nkịta nọrọ ma ọ dịkarịa ala otu elekere n'èzí.
Ozugbo oge egwuregwu gwụchara Golden gị, obi ga-adị gị ụtọ, dịkwa ọ andụ maka ihe ọ bụla ị zubere maka ụbọchị ahụ.
Ọ bụrụ n’ịga arụ ọrụ n’ụlọ, ị ga - edowe ha n’ime igbe eji egwuri egwu kachasị amasị ha. Naanị jide n'aka na ịlaghachi n'oge ezumike nri ehihie gị iji nye ha ezigbo ije nkeji iri. Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ịrụ ọrụ site n'ụlọ wee tụ anya na nkịta a ga-agbaso usoro ọ bụla gị - na-etinye uche na mmetụta ọ bụla ị na-enye ya.
Ka ụbọchị na-abịa na njedebe Mini Retriever ga-adị n'akụkụ gị iji kechie.
Ma ị nwere ụbọchị ọrụ siri ike na ọrụ, ma ọ bụ ụbọchị ọrụ jupụtara na ọrụ ụlọ, nkịta dị nro ma nwee ịhụnanya nke nkịta ga-anọ iji chetara gị oge a.
Ha ga-edina n’ala ala akwa gị na-arọ nrọ ka gị na ha nọrọ ụbọchị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ngwakọ a bụ mgbakwunye na-adịbeghị anya, ụdị nne na nna ha nwere ogologo na nnukwu akụkọ ihe mere eme.
Agbanyeghị na Golden Retriever na Cocker Spaniel nọdụ na otu nkịta nke Sporting, ụmụ abụọ a enweghị ike ịdị iche.
Akpa Golden Retrievers bụ nke Lord Tweedmouth zụrụ na Scotland mgbe ọ gwakọtara Onye na-edo edo edo na Tweed Water Spaniel dị ugbu a. Uwe a na-ekpuchi mmiri nke anụ ahụ na ahụ siri ike nyere ha ikike ịba ọgaranya na ihu igwe mmiri ozuzo na ala ala, na-enyere ha aka itolite ewu ewu n'etiti ndị dinta egwuregwu.
Ha bụ otu ìgwè dị obere ma e jiri ya tụnyere nkịta ndị ọzọ mana ha nwere ezigbo ntụkwasị obi na-esote ma bụrụ ndị America kachasị ewu ewu nke atọ.
N'aka nke ọzọ Cocker Spaniel nwere akụkọ puru iche . Ọ bụ ezie na ndị na-achụ nta egwuregwu Britain na-ejikarị ndị nkịta a eme ihe si na Spain. Tupu nkịta a na-akpọ purebred na-achọkarị ụdị anụ Spaniel na-ejikọta ọnụ.
Otú ọ dị ka oge na-aga site na Cocker nkewa maka nke ọ na-elekwasị anya n'inyere ndị na-achụ nta ichu ụdị nnụnụ a maara dị ka woodcock na ọ ga-abụ nna nna nke Cocker Spaniels nke oge a. A matara ha na 1884 mgbe e guzobere American kennel Club na ụdị akụkọ ihe mere eme anọwo kemgbe ahụ.
Ugbu a na akụkọ ihe mere eme nke Mini Golden Retriever.
Dị nnọọ ka ngwakọta ndị ọzọ na-akụ akụkọ ihe mere eme nke ngwakọ a adịghị edozi nke ọma.
Agbanyeghị na imepụta Labradoodle na 1950s na njedebe ya na ewu ewu, ọ dị mma ịsị na Mini Golden bụ otu n'ime ọtụtụ ụdị ngwakọ ndị bịara na mkpali nke Labradoodle akụkọ ihe mere eme.
N’agbanyeghi na oghaghi n’iru mbido a, o doro anya na ngwakọta a bụ ihe onye ọ bụla hụrụ n’anya nke ọma.
5 Eziokwu Funtọ
N'adịghị ka ụdị anụmanụ ndị ọzọ Obere Golden Retriever bụ obe.
Nne na nna ọzọ a (Cocker Spaniel) bụ obere mkpụrụ na Sporting Group. Ka a sịkwa ihe mere ndị na-azụ atụrụ ji họrọ nkịta a hụrụ n'anya iji nyere aka mezie ọla edo ahụ.
Ọ bụ ezie na ụdị a na-abụ nkịta jọgburu onwe ya nke American Dream - Golden Retriever na-esite na Scotland.
Ma Cocker Spaniel na Golden Retriever enweela oge ha na nnukwu enyo, ya na Lady si na Disney film Lady na Tramp bu Cocker Spaniel na Air Bud si Disney’s Air Bud bu ndi Golden Retriever.
Omume dị elu nke Mini Golden enyerela ndị mmadụ aka n'ọtụtụ ụzọ ma na-ejikarị ha dị ka nkịta nkasi obi.
Dị nnọọ ka ọkọlọtọ Golden Retriever na Mini Golden Retriever bụ nkịta na-enwe obi ụtọ.
Nke a bụ nkịta ezinụlọ dị ebube nke ahụ nwere ọgụgụ isi ma dịkwa mfe ịzụ.
Dika ha pere mpe karia ndi okacha amara ma nwekwaa obi ojoo nke Cocker Spaniel, enwere ike ichota Mini Golden Retriever dika obere ola edo site na nkwalite ndi ozo.
Ha dị ezigbo mma ma na-apụ apụ.
Bredị a hụrụ n'anya igwu egwu ma enweghị ụkọ egwuregwu ma ọ bụ ume.
Ma ọ bụ ihe mbụ n'ụtụtụ ma ọ bụ tupu ị lakpuo ụra, ha na-adị njikere mgbe niile igwu egwu yabụ zụta ụfọdụ ihe egwuregwu ụmụaka ga-adịgide adịgide!
Ọ bụ ezie na ha dị jụụ, ụdị a nwere ike ịgba mgba n'ime ụlọ. Nwa nkịta na-ada ụda olu ma na-agbanwe agbanwe ọzụzụ bụ ihe ị nwere ike ime iji dozie esemokwu ahụ ma belata ohere nke ogbugbo ịghọ agwa.
Agbanyeghị enwere ụfọdụ agwa na omume ụfọdụ ị kwesịrị ịma.
Levelsdị ume ike nke ìgwè a nwere ike ịdị elu nke mere na ị ga-enye ha ọrụ zuru oke ụbọchị niile ma ọ bụghị na ha nwere ike ịmalite ịme ihe!
Ọzọkwa ha ga-achọ ụdị ụfọdụ nke ọrụ pụrụ iche. Can nwere ike ịtụle ihe omume dị ka ebe mmiri na-egwu mmiri, agility ma ọ bụ rally - ha niile na-agba ume ahụ gị na uche gị ka ọ dị nkọ.
Ọpụrụiche pụrụ iche (dị ka ọzụzụ asambodo nkịta) nwekwara ike inye nnukwu ohere iji nyeghachi obodo gị. Gụnyere obere Golden gị ga-enwe mmasị nlebara anya ọ bụla ọ na-enweta mgbe ị na-eleta ụlọ ndị nọọsụ na ụlọ ọgwụ.
Pupp na ndị okenye bụkarị nhọrọ kachasị ọnụ.
A Mini Golden Retriever nwa nkita ga-efu ihe dịka $ 3500 site na onye na-azụlite aha ọma.
E nwere ọtụtụ mmefu onye na-azụ ihe ga-akwụ ụgwọ iji nye ndị nkịta ha nlekọta kachasị mma nke pụtara na nwa akwụ ụgwọ a nwere ike ọ gaghị adị ọnụ maka mmadụ niile.
Ọ bụ ezie na ndị toro eto dị ọnụ ala karịa ịzụta, ha dị ole na ole.
Otu ihe a na-aga maka nnabata - dị ka Mini Golden dị oke mkpa nke a bụ nkịta na-adịkarịghị ịchọta na ebe obibi.
Nwa nkita $ 3500 +
Okenye $ 1000- $ 2000
Nkuchi $ 150- $ 450
Lee ndị nne na nna anya tupu ụmụ nkịta: Otu ụzọ kacha mma ị ga-esi ebu amụma ihe nwa nkita gị ga-adị bụ achọpụta ndị nne na nna . Gbaa mbọ hụ na ndị nne na nna yiri ka ha dị ezigbo mma ma enyochala ha nke ọma maka nsogbu ahụike.
Na-atụ anya ọdịiche dị iche iche: Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ihe na-anwa ike ha kachasị ịnọrọ n'obe oke Mini Golden Retriever n'ogo, ọdịiche dị iche nwere ike ime. N'ihi nke a ị kwesịrị ijide n'aka na ị zụrụ nri kwesịrị ekwesị maka oke nha. Hụkwa na ị ga-enwerịrị nnata mgbe nwa nkita gị ga - eto ngwa ngwa ma ọ bụ nnukwu efere!
Tụlee ụdị ụdị ahụ: Dị ka Mini Golden bụ ndị na-azụ ihe ewu ewu na-ewu ewu nwere ike ịgba puppy puppy. Ọ bụrụ n ’ọgụ na mgba ị chọta otu, ị kwesịrị ịtụle ụdị ụdị ndị ọzọ dịka Golden Cocker Retriever na Goldendoodle .
Zere nkuzi goldens: Bredị Teacup bụ ndị ama ama ugbu a na ị nwere ike ịnụla Teacup Golden Retriever. Ọ bụ ezie na ụmụaka ndị a nwere ike ịdị ka ọmarịcha obere obere ha na-ewetakarị ọtụtụ nsogbu ahụike. Gbaa mbọ hụ na ị nwetaghị ihe pere mpe.
Lezienụ anya maka aghụghọ: Dika udiri ahihia a bu ihe ama ama ugbua enwere umu ihe nkita di iche iche na-amuta otutu umuaka a. Ọ bụrụ na nkwekọrịta dị oke mma ịbụ eziokwu wee zere ya. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ihe yiri ka ha nwere pups ndị a oge niile nke ahụ bụ akara ịdọ aka ná ntị ọzọ.
Dị ka ọtụtụ ngwakọta ndị ọzọ na-esite na Mini Golden Retrievers ọdịdị nwere ike ịdị iche pup na pup n'ihi na nke a abụghị ụdị amụrụ ama nwere ụkpụrụ bred gọọmentị.
N'agbanyeghị ntakịrị ọdịiche dị iche iche site na pup na pup ọtụtụ ụdị ụdị ụdị ụdị ụdị a ka na-emetụta aha ha.
Obere Mini dị ka obere, ụlọ-enyi na enyi Nweta ọla edo .
Ha nwere asusu na-acha uhie uhie nke na-ada site mgbe ochi ha di nkpa - a ghaghi ihu umu ogwu a na-enwe obi uto n'enweghi ogba aghara.
Nwere ike ịtụ anya ka ìgwè a guzoro ihe na-erughị sentimita iri abụọ n’ogologo ma tụọ ihe na-erughị kilogram iri abụọ na ise.
Agbanyeghị n'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike ịfe 20 sentimita asatọ n'ogologo - nke a dị obere ma na-emekarị mgbe Golden Retriever na-eri nnukwu Cocker Spaniel.
Nkịta a na-abata na ọkọlọtọ Golden agba agba agba agba .
Na-atụ anya ndò ọla edo niile site na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na nke kachasị mma. Fọdụ ga-enwe ntakịrị ụdịrị na-ekele nne na nna ha Cocker Spaniel mana ọtụtụ oge nkịta ndị a bụ agba ọla edo siri ike.
Bredị a nwere uwe mara mma dị nro.
Minifọdụ Mini Goldens nwere ike ịdabere na n'akụkụ Golden Retriever ma nwee uwe ogologo abụọ ogologo.
Ndị ọzọ nọ karịa na Cocker Spaniel n'akụkụ ma nwee uwe na-enweghị atụ yana ntị dị ogologo.
Abia na ilebara umu obere umu a n’anya ị ga-etinye oge ka ukwuu na iji ejiji na mmega ahụ.
Ọ bụ ezie na ụdị ahụ dị mma maka ndị na-amalite ịmalite ekele maka ọzụzụ ha nwere, ha na-achọ ọtụtụ mgbatị n'ihi nne na nna ha na-arụ ọrụ.
Agbanyeghị nlekọta nlekọta abụọ a, Mini Golden Retriever abụghị ụdị ọzụzụ dị elu ma na-agbasikwa ike ma sie ike mgbe onye na-azụlite aha ọma na-azụ ya.
Dika ahihia a bu nkpuru nke nne na nna na aru oru ha gha acho ezigbo mmega.
Ha adighi adi nma dika udiri anumanu ndi ozo agbanyeghị ha ga-achọ inwe mmega ahụ karịa ụdị ụdị mkpakọrịta ndị ọzọ.
Maka ịgagharị, ha ga-achọ ije ije nkeji iri atọ kwa ụbọchị.
Gba ọsọ nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ maka ụdị a ka Golden Retrievers dị njikere ijikwa ụdị anụ ọhịa niile.
Ma oburu na nwa gi ahu tozuru oke, inwere ike iwere ha na njem ma obu igwe.
Inye ha mmega ahụ na-enye ha ọgụgụ isi na anụ ahụ ha chọrọ.
N'ihe banyere mmega ahụ kachasị mma maka ụdị a ha na-eme nke ọma na egwuregwu arụmọrụ dịka ụzọ ụkwụ na egwuregwu egwuregwu.
Ọkwa Ọrụ: 3/5.
Ọrụ Na-amasịkarị: Ilszọ ụkwụ.
A maara nkịta a maka aji ọla edo mara mma ha.
N'ihe banyere iji ejiji, ị kwesịrị ịtụ anya itinye obere ọrụ na mpaghara a.
Ihichapu kwa ụbọchị na ahịhịa na-egbuke egbuke bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ọ dị ntakịrị. Omume a kwa ụbọchị dị oké mkpa maka ụdị dị ka ọ ga-enyere aka belata ihe ndina na tangles (nke nwere ike ibute ọrịa anụ ahụ).
Ọ bụrụ na Obere gị na-enweta ọtụtụ uwe mkpuchi Cocker Spaniel, ị ga-ehichapụ ha ọtụtụ mgbe. Ihe ọzọ karịa nke a, ị ga-agbaso mkpa ị na-eji edozi edozi, dịka idebe ezigbo eze ọcha, idebe ntị ọcha na ijide n'aka na e bepụ mbọ.
Zọ kachasị ọsọ n'obi nkịta gị bụ site na afọ ha na Mini Golden abụghị otu.
Dika nkịta nkịta a nwere ike ịdị iche na ọtụtụ nri ha nwekwara ike.
Exercisekwa mmega ole nkịta gị nwere ike imetụta ole ma ọ bụ obere nkịta gị ga-eri.
Ezigbo usoro isi mkpịsị aka bụ inye ha nri gburugburu iko 1-1.5 ugboro abụọ n'ụbọchị - mana ọ bụrụ na ị maghị mgbe ahụ jikwaa onye dọkịta gị.
Mgbe ọ na-abịa ịzụ nri jide n'aka na ị ga-achọ zuru ezu ma kwụ ọtọ. A ga - ere ahịa ọ bụla na - eso ụkpụrụ ụkpụrụ nchịkwa ndị isi nri nke American Association ka ọ ga - enyekwa ezigbo nri maka nri na mmepe nwa gị.
Ọ bụ ezie na Mini Golden Retriever dị na obere njedebe ma e jiri ya tụnyere ọkọlọtọ Golden Golden ọ dịghị mkpa ịzụta nri maka obere nkịta.
Nwoke: 15-20 sentimita asatọ 30-45 pound
Nwanyi: 12-18 sentimita asatọ 20-30 pound
Ọ bụ ezie na ụdị nne na nna Mini Golden Retriever nwere ahụike dị mma ị kwesịrị ị needa ntị na ụfọdụ nsogbu ahụike:
Hip Dysplasia: Nrụrụ dị na hip nke bọọlụ nkwonkwo hip anaghị adaba na oghere. Nke a nwere ike ibute ọrịa nkwonkwo na-emebi ma ọ bụ ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Cataracts: Nke a na - eme ka oghere nke anya mee urukpuru ma bụrụkwa ihe jikọrọ ya na Cocker Spaniels.
Subvalvular Aortic Ọnwụ: Ọrịa obi nke na - egbochi valvụ aortic nke obi ma na - akpata obi ịrụsi ọrụ ike iji nyefee ọbara oxygenated n'ime ahụ dum.
Agbanyeghị nke a bụ nkịta ahụike.
Ogologo oge ole ka Mini Retriever dị ndụ?
Nwere ike ịtụ anya ka nwa a na-ebi ndụ ruo afọ 10-12.
Abịa na ịzụ ozuzu a ma Golden Retriever na Cocker Spaniel tozuru oke
A maara Goldens nke ọma dịka otu n'ime nkịta nkịta ọrụ kacha mma n'ihi ọzụzụ na ọgụgụ isi ha, na Cockers na-eme nke ọma n'inye ịhụnanya na nkwado.
N’ihi ya, ịzụ nwa obere Golden Retriever kwesịrị ịbụ nke kwụ ọtọ.
Naanị cheta n'ihi Cocker Spaniel's nghọta ị gaghị enwe ike iwe ma ọ bụ nwee obi ọjọọ n'oge ọzụzụ.
Ikwesiri iji nkwenye siri ike zụọ ha.
Ọ bụrụ na nkịta gị emee ihe na-adịghị mma ( dị ka nsị ) mgbe ahụ i nwere ike ịkụda omume a site na ịzigharị nsị na-egwuri egwu ma ọ bụ na-agwụ oge egwuregwu ma ọ bụrụ na eze emetụ akpụkpọ gị.
Dị ka mmekọrịta ọ bụla nke puppy bụ isi ihe iji jide n'aka na ha dị njikere ịnweta nnukwu ụwa.
Ka ọ na-erule oge nwa gị dị izu 8-12 ga-enwerịrị ahụmịhe dịgasị iche iche nke nkịta na-enweta kwa ụbọchị (dịka mgbịrịgba ọnụ ụzọ na-akụ ma ọ bụ na-edozi gị maka ịhazi ma ọ bụ ịhọpụta ọhụụ).
Ọ bụrụ na ijide n'aka ịme ka ahụmịhe ọ bụla bụrụ nke dị mma site na nkwado dị mma, nkịta gị ga-arụ ọrụ n'oge ọ bụla.
O doro anya na ọzụzụ na ịba ọgaranya agaghị akwụsị mgbe nkịta gị toro.
Ọ bụla nkịta ochie nwere ihe ọhụrụ ị ga-amụta ya mere tụlee mgbakwunye uche na nke anụ ahụ iji mee ka Mini Retriever dị nkọ ma nọrọ na nche. Egwuregwu kachasị mma na ịba ụba nke uche maka ìgwè a na-ewepụta nke nwere ike ịbịa n'ụdị egwuregwu canine dị ka nkịta diski na ọdọ mmiri.
Na mkpụmkpụ, Mini Golden chọrọ ọzụzụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Uche ha dị elu na ọgụgụ isi ha na-eme ka ha bụrụ nhọrọ dị mma maka ndị na-agba agba izizi.
Mini Golden Retrievers na-eme nnukwu nkịta maka ndị na-elekọta oge mbụ .
Iguzosi ike n'ihe nke nkịta a ga-enye gị enweghị ọnụ ahịa - enweghị ezigbo enyi karịa Ọlaedo!
Nke a bụ nkịta na-ekpo ọkụ ma mgbe ọ bụla ị gwụchara, ha ga-apụ ma bụrụ ezigbo enyi ezinụlọ. Ha dị nwayọ, na-ahụ n'anya ma na-echebara mgbanwe obere ọnọdụ gị echiche.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ọla edo ma ị nweghị oghere, nke a nwere ike ịbụ ụdị zuru oke maka gị. Nke a bụ ọla edo akpọrọ n'ime obere ngwugwu.
Ọ bụ ezie na nkịta ndị a ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na enyere ha ọrụ ha ga-enwe obi ụtọ na oge egwuregwu 60 siri ike nke nwere ọtụtụ ije tụbara na ụbọchị. Nke a na-eme ka ha zuo oke maka ezinụlọ nwere ụmụaka na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ ndị chọrọ mkpali iji malite usoro mgbatị ha.
N'ozuzu ma ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa mmega ahụ dị oke ala na ụfọdụ ịmịcha kwa ụbọchị iji mee ka uwe ahụ dị nro, nke dị ọcha na nke na-enweghị eriri, nke a bụ nkịta dị mfe ilekọta.
Mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a ...
Top Ajụjụ Banyere Briard Dog Izu
Mmasị nke Uhie Pụrụ Iche Pụrụ Iche
kedu ihe labrador ọlaọcha dị ka
otu esi etinye akwa anụ na nkịta
nkịta na-ekpo ọkụ ntị na akọrọ imi
nkịta hind ụkwụ muscle anatomi
Onye ọzụzụ atụrụ obere German tozuru oke